Nin uu maroodi legday, kaddibna uu libaax cunay - Waadinews | Somali News and Entertainments
Nin uu maroodi legday, kaddibna uu libaax cunay
Intee in la’eg ayay ku haleeli kartaa nasiib darada in maroodi iyo libaax isugu kaa tagaan. Hagaag, nin loo malaynayo in uu ka tirsanyahay kooxaha xayawaanka ugaadhsada ayaa la sheegay in uu libaax cunay waxyar kadib markii uu maroodi dhaawac xalis ah u geystay.
Saraakiisha kaynta Kruger Park oo ka mid ah kaymaha ugu waaweyn Afrika, kuna taala dalka Koonfur Afrika ayaa sheegay in ay heleen qeyb yar oo ka mid ah jidhka ninkii uu libaaxa cunay. Agaasimaha kaynta ayaa yidhi
“In lug lagu soo galo kayntan ma ahan arrin munaasab ah, halis badan ayaa ka dhalan karta, waxaana jira caddeymo taas muujinaya oo dhacay”. Kayntan ayaa waxa ay wajahaysaa dhibaatooyin badan oo dhanka ugaarsiga ah xilli dalabka foolka maroodiga iyo wiyisha ee qaaradda Aasiya uu sii kordhayo.
Maalintii sabtidii garoonka Hong Kong waxaa lagu qabtay fool wiyil oo qiimaheeda suuqa madoow lagu qiyaasay $2.1 milyan. BBC
Related Topics:#libaaxMaroodiNin libaax cuanay
Nin iyo libaax isu baxay iyo wixii ka dhacay
Daawo Rag Libaax Ka Eryaya Raq
Daawo 3 Nin oo waranle ah oo 15 Libaax ka qaaday Ugaadh ay cunayeen
Daawo Askar nolosha ku tooganaysa Libaax Baxsad ah